filter ကိုအိတ်, nomex filter ကိုအိတ်, မြေမှုန့်စုဆောင်းထုတ်လုပ်သူ & ပေးသွင်း - ECOGRACE
ဖုန်မှုန့်ကောက်ခံရေး Filter ကိုအိတ်
Nomex Filter ကို Bag
ဖန်မျှင်ထည် Filter ကို Bag
Ryton PPS Filter ကို Bag
polyester Filter ကို Bag
စက်မှု Filter ကိုပိတ်စ
စက်မှု Filter ကို Bag
ကတ္တရာစက်ရုံ Filter ကိုအိတ်
ဘိလပ်မြေစက်ရုံ Filter ကိုအိတ်
ဓာတ်အားပေးစက်ရုံ Air ကို Filter ကို
သံမဏိစက်ရုံ Filter ကိုအိတ်
polypropylene Filter ကိုပိတ်စ
အိတ် Filter ကိုဖုန်ကောက်ခံရေး
ဖုန်မှုန့်ကောက်ခံရေး Filter ကိုကျည်တောင့်
ဓာတ်ငွေ့မှုန် Separation ဆိုင်ကလုန်းခြားဖုန်ကောက်ခံရေး
စက်ရုံဖုန် Extraction Bag Filter ကိုဖုန်ကောက်ခံရေးရောစပ်ကတ္တရာ
ကတ္တရာသုတ်စက်ရုံ Flue ဓါတ်ငွေ့ Filtration Bag ဖုန်ကောက်ခံရေး Filter
သံမဏိအလုပ်လုပ် Flue ဓါတ်ငွေ့ Filtration ပစ္စည်းကိရိယာဖုန်ကောက်ခံရေး
သံမဏိစက်ရုံလေထုညစ်ညမ်းမှုထိန်းချုပ်ရေး Flue ဓါတ်ငွေ့ System ကိုဖုန်ကောက်ခံရေး Filter
သတ္တုမီးဖိုထဲသံမဏိအလုပ်လုပ် Flue ဓါတ်ငွေ့ Filtration System ကိုဖုန်ကောက်ခံရေး
ဖုန်မှုန့်ကောက်ခံရေး Filter ကို Element ကိုအိတ်ကြေးနန်း Frame က Filter ကိုကေ့ Filter
စက်မှုဖုန်ကောက်ခံရေး Bag Filter ကိုကေ့ Filter Element ကို Filter
ဘွိုင်လာ Flue ဓါတ်ငွေ့ Filtration ဆိုင်ကလုန်း Bag ဖုန်ကောက်ခံရေးစနစ် Filter
Nomex အထည်အလိပ်ဖုန် Nomex Filter ကိုအိတ် Filter
သတ္တုလုပ်ငန်းအလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲဖုန် / Powder စုတ်ယူခြင်းစက်သည့်အရာတစ်ခုဖုန်ကောက်ခံရေး
100% Teflon / PTFE အထည်အလိပ် PTFE Filter ကိုအိတ်
စက်ဆိုင်ကလုန်းခြား Wood ကအလုပ်လုပ်စက်ရုံစော
PTFE လမိုင်း PPS အင်္ကျီလက်ကို Power စက်ရုံ Air ကို Filter ကိုအိတ် Filter
စက်ရုံဖုန်ပိတ်စဖုန် Filter ကိုအိတ် Filter ရောစပ်ကတ္တရာ
ကျနော်တို့ Filtration ဖြေရှင်းချက်၏လုပ်ငန်းဦးဆောင်သွား!
2002 ခုနှစ်တွင်စတင်တည်ထောင် ECOGRACE, ဟန်ကျိုး, တရုတ်မှာတည်ရှိပါတယ်စက်ရုံ, filtration ဧရိယာထဲမှာဆယ်စုနှစ်အတွေ့အကြုံနှင့်အတူကျနော်တို့တရုတ်နှင့်ပြည်ပဈေးကွက်အတွက်ယခုအလွန်လူကြိုက်များကြသည်။ ကျနော်တို့သတ္တုအရည်ပျော် / Foundary, ဓာတ်အားပေးစက်ရုံများကဲ့သို့စက်မှုလုပ်ငန်းများအတွက်အလွန်ကောင်းစွာတာဝန်ထမ်းဆောင်ကြပါပြီ, ကတ္တရာသုံးစက်ရုံ, ဘိလပ်မြေစက်ရုံစက်ရုံ, စွမ်းအင်စက်မှုလုပ်ငန်းမှစွန့်ပစ်ကုသမှုရောစပ်ကျနော်တို့ကသူတို့လေထုညစ်ညမ်းမှုထိန်းချုပ်ရေးစနစ်ကောင်းစွာအလုပ်လုပ်ကြသည်။
ECOGRACE အများစုမှာအားသာချက်ကုန်ပစ္စည်းအမြင့်အပူချိန် Filter ကိုအိတ်, Hot ဓါတ်ငွေ့ Filter ကိုဖြစ်ပါတယ်။
Nomex Filter ကိုအိတ် / Aramid Filter ကိုအိတ်, PTFE 100% Filter ကိုအိတ်, PPS / Ryton, PTFE အမြှေးပါးဖန်မျှင်ထည် Filter ကိုအိတ် Filter ကိုခံစားခဲ့ခံစားရတယ်။ ဖုန် Filter ကိုအဝတ်အထည်နှင့်ဖုန်ကောက်ခံရေး Filter ကိုအိတ်မဆို quesitons ကျနော်တို့2နာရီအတွင်း reply မည်, ကျွန်ုပ်တို့နှင့်အတူဆက်သွယ်အခမဲ့ခံစားရပါ။
သံမဏိ / သံ / လူမီနီယမ် / ခဲ / Non-ferrous သတ္တုရောစပ်
ကျောက်မီးသွေးဘွိုင်လာ / စွန့်ပစ်မီးရှို့ဖျက်ဆီးပစ်ခတ်
ဘိလပ်မြေ / Lime / Gypsum
တဖြည်းဖြည်းစားနိုင်ပြီးမြင့်မားတဲ့ high အပူချိန် /
ပိုပြီး applications များ Read
လှသောခဲဘို့တာဝန်ထမ်းဆောင်လူမီနီယမ်အရည်ပျော်မီးဖိုထဲဖုန်ကောက်ခံရေး, အမြင့်အပူချိန် Flue ဓါတ်ငွေ့စုတ်ယူခြင်း Extraction System ကိုလေတပ် Polllution ထိန်းချုပ်ရေးစနစ်ဖုန်ဖုန် CollectorEcograce မြေမှုန့်စုစည်းအပိုင်း, ကြေးနီ, လူမီနီယမ်ရောစပ်အပင်။ အဆိုပါသွေးခုန်နှုန်းဂျက်အမျိုးအစားဖုန်မှုန့်စုဆောင်းထားတဲ့တိုးတက်လာသော High-efficiency ဖြစ်ပါသည်
ကတ္တရာသုံးစက်ရုံများအတွက်သင့်လျော်သော filter ကိုဆုံးဖြတ်ရန်ဘယ်လိုနေသလဲ?
ECOGRACE ကတ္တရာစက်ရုံအတွက်အိတ် filter များထုတ်လုပ်ခြင်း။ အပင်ဖော်စပ်ကတ္တရာအတွက်အိတ် Filter ကိုအစွန်းရောက်ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာအခြေအနေများနှင့်ရန်လိုတဖြည်းဖြည်းစားနိုင်ပြီးဖုန်ထူဓါတ်ငွေ့နှင့်ထိတွေ့လျက်ရှိသည်။ မကြာခဏအပူချိန်အတက်အကျများနှင့်အလားအလာရှိသောမီးစများ၌၎င်းရရှိလာတဲ့မကြာခဏမှတ်တိုင်များဟာ filter ကိုပစ္စည်းအပေါ်နောက်ထပ်ဖိအားထားတော်မူ၏။
Zhejiang ကျေးဇူးတော်ရှိစေသတည်း Envirotech Co. , Ltd.with သည့်နာမည်ကြီးအမှတ်တံဆိပ် & quote; ECOGRACE & quote ;, ကျေးဇူးတော်ရှိစေသတည်း၏လုပ်ငန်းခွဲများထဲမှ U.K အခြေစိုက်နှင့်တရုတ်နိုင်ငံများတွင်ဖွံ့ဖြိုးပြီး, MFG Filter ဖြစ်ပါတယ်။
မူပိုင် 2016 Zhejiang ကျေးဇူးတော်ရှိစေသတည်း Envirotech Co. , Ltd All rights reserved ။ Leadong ကထောက်ခံ